Shaakir ”Maamul Goboleedyada iyo Itoobiya anaga ayaa ka difaacna Shabaab” – Idil News
Shaakir ”Maamul Goboleedyada iyo Itoobiya anaga ayaa ka difaacna Shabaab”
Madaxweynaha Maamulka Gobolada Dhexe ee Ahlusuna Waljamaaca ayaa sheegay in dagaalkii Gobolada qaar looga saaray Al-Shabaab ay doorweyn ku lahaayeen taas oo keentay in uu amni noqdo deegaanada ay maamulaan.
Waxa uu sheegay in dadka ku nool Gobolada Dhexe gaar ahaan deegaanada Ahlusuna aan waqtigaan laga helin cid ka tirsan Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaas raaciyay in deegaano badan oo ku dhow dhow Gobolada Ahlusuna ay maamusho ay difaac u yihiin.
“Waxaan idiin sheegayaa in gobolada iyo Maamulda ku teedsan deegaanada Gobolada dhexe iyo dowladda Itoobiya hadii aysan jiri laheyn Ahlusuna in ay Al-Shabaab geli lahaayeen balse aan ka difaacnay anaga ayuu yiri Madaxweyne Shaakir.
Hadalkaan ayaa waxa uu ka sheegay munaasabad ay heshiis shalay gelinkii dambe ku kala saxiixdeen Maamulka Galmudug madax ka socotay..
Ayub A. Ali – Idil News